भगवान गणेशलाई किन प्रिय छ ‘लड्डू’ ? जान्नुहोस रोचक कथा – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
भगवान गणेशलाई किन प्रिय छ ‘लड्डू’ ? जान्नुहोस रोचक कथा
७ असार २०७९, मंगलवार ०८:१४
काठमाडौं । हिन्दू धर्ममा भगवानलाई प्रसाद अर्पण नगरी गरिएको हरेक पूजा अधुरो हुने विश्वास छ । जसरी हामीलाई खानामा केही चीजहरू मनपर्छ, त्यसैगरी प्रत्येक देवताको मनपर्ने खाना पनि फरक फरक हुन्छ।
भगवान गणेश पनि यी देवतामध्ये एक हुन् जसलाई लड्डू धेरै मन पर्छ। भनिन्छ, गणेशलाई मोतीचुर लड्डू असाध्यै मन पर्छ । जसका कारण भक्तजनहरूले विशेषगरी आफ्नो पूजामा शुद्ध घिउबाट बनेको लड्डू चढाउने गर्दछन् ।
तर के तपाईलाई थाहा छ भगवान गणेशलाई किन लड्डू मन पर्छ ? साथै यसको पछाडि पौराणिक कथा के छ ? यदि छैन भने जान्नुहोस् अर्को रोचक कथा ।
भगवान गणेशलाई मन पर्ने लड्डूको पछाडि पुराणमा एउटा कथा छ । जस अनुसार एक पटक ऋषि अत्री र उनकी पत्नीले भगवान गणेशलाई आफ्नो स्थानमा भोजनको लागि निम्तो दिए। जब गणेशजी खानाको लागि आफ्नो ठाउँमा गए, अनसूयाले उहाँलाई खाना खुवाइन्।
अनसूया खानामा भर परे, जहाँ गणेशले हतारमा खाना खत्तम गर्थे । बारम्बार यस्तो भइरहँदा अनुसयालाई चिन्ता लाग्न थाल्यो कि गणेशको पेट भरिएन भने राम्रो हुँदैन भनेर ।
घरमा बोलाइएका पाहुनाको पेट भरिएको हुनुपर्छ । जब अनसूया निकै विचलित भइन्, उनको दिमागमा समाधानको उपाय आयो । अनसूयाले सोचेकी थिइन् कि खाना खाएपछि केही मिठो परिकार गर्दा भगवान गणेशको भोक मेटिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले गणेशजीको अगाडि मोदकको थाली ल्याइन् ।
जब भगवान गणेशले लड्डू खाए, उनी खुशीले उफ्रिए । मीठो(मिठा लड्डू मुखमा सजिलै पग्लन्छ र खुसीसाथ खान्छन्।
लड्डूको मिठासले उसको पेट र मन दुवै भरियो । एक पटक माता पार्वतीले पनि गणेश जीको अगाडि लड्डूको वर्णन गरिन् । यो सुनेर भगवान गणेशले त्यो खाने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । माता पार्वतीले मोदक पाएपछि उनी निकै खुसी भए । त्यसबेलादेखि भगवान गणेशलाई लड्डू धेरै मनपर्ने मान्यता रहेको बताइन्छ ।
यस्तै एक पटक माता पार्वतीले पनि गणेश जीको अगाडि लड्डूको वर्णन गरिन् । यो सुनेर भगवान गणेशले त्यो खाने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वकालमा पार्वतीदेवीलाई देवताहरूले अमृतले तयार पारिएको एउटा दिव्य लड्डु दिए । लड्डु देखेर कुमारजी र गणेशजीले मातासँग जिद्दी गरेर लड्डु माग्न थाले । तब माताले लड्डुको महत्वको वर्णन गरेर भत्रुभयो कि तिमीहरू मध्ये जसले धर्माचरणद्वारा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर सर्वप्रथम सबै तीर्थको जसले भ्रमण गरेर आउँछ म उसैलाई यो लड्डु दिन्छु ।
माताको यस्तो कुरा सुनेर कुमारले मयूरमा सवार भएर मुहूर्तभरमा सबै तीर्थको स्नान गरेर आए । यता गणेशजी भने आफ्नो वाहन मुसा भएका कारण तीर्थ भ्रमण गर्न असमर्थ भए ।
तब गणेशजीले श्रद्धापूर्वक माता–पितालाई परिक्रमा गरेर पिताजीको अगाडि उभिए । यो देखेर माता पार्वतीले भनिन् सबै तीर्थमा गरेको स्नान, सबै देवतालाई गरेको नमस्कार, सबै यज्ञको अनुष्ठान तथा सबै प्रकारको व्रत, मन्त्र, योग र संयमको पालन यीसबै साधनाहरु माता–पिताको पूजाको सोह«अंशको बराबर पनि हुन सक्दैन ।
त्यसकारण गणेशजी सयौं पुत्रहरू र सयौं गणहरूभन्दा पनि धेरै छन् । त्यसैले उनलाई गणनायक पनि भनिन्छ । पार्वतीमाताले भत्रुहुन्छ अतः यो लड्डु म गणेशलाई अर्पण गर्दछु । त्यसकारण यो लड्डुसँग माता–पिताको भक्ति पनि जोडिएको छ । हामीले गणेश भगवानलाई लड्डु अर्पण गरेर चढाउँदा यो उनले गरेको माता–पिताप्रतिको भक्ति भावलाई मनन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । उनको साथमा रहने लड्डु यसैको प्रतीक हो ।
भगवान गणेश सबै शक्तिका श्रोत पनि हुन् । हुनत हाम्रा सबै देवीदेवताहरुमा दातापन छ तर गणेशजी मंगलदाता हुन् । गणेशजी हाम्रो सोच , चिन्तन , धारणा र व्यवहारमा यसकारण पूजनीय छ कि उहाँ गुणहरुको खानी हुनुहुन्छ । उहाँमा सबै गुण र शक्तिहरू शोभायमान छ । उहाँ देवताहरूमध्ये गुणको देवता हुनुहुन्छ ।
गणेशजीको आँखा सानो छ जस्ले हामीलाई सूक्ष्म हेराइ हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान दिलाउँछ । गणेशजीको ठूलो शिर विवेकको प्रतीक हो । गणेशजीको ठूलो पेटले सहनशीलतालाई पचाउनुपर्छ भनेर सूचित गर्दछ ।
बैंग्लोर आइपिएलको प्लेअफमा
५७७ जना सांसदका लागि
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कृषि
एनएमबी र विन्ड पावरबीच